प्रहरी हेडक्वार्टरमाथि प्रश्न : जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्दै माइकिङ गर्ने को थियो ? – आफ्नो समाचार
Afno News — ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०३:५५0comment
अस्पतालमा भएको झडपमा प्रहरी जवानको मृत्यु भएको खबर डीएसपीले आफैं माइकबाट फुकेका थिए । उनले प्रहरी मरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा गरेको माइकिङ एउटा टेलिभिजनमा लाइभ प्रशारण भएको थियो । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई बिहीबार दिउँसो काठमाडौं ल्याउने क्रममा डा. केसी समर्थक विद्यार्थी र प्रहरीबीच झपड भएको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरसहित ३ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये एक प्रहरी जवानको छातीमा सीसा र चिर्पटले लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सञ्चार माध्यमलाई मानवीय संवेदनाको विषयमा सूचनाको आधिकारिक पुष्टि नगरी समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचार ब्रेक गर्ने होडबाजीमा असत्य समाचार संप्रेषण गर्ने र मृत्यु जस्तो मानवीय संवदेनाको विषयमा सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि समेत नगरी समाचार संप्रेषण गर्दा त्यसबाट सम्बन्धित संगठन र निजको परिवारमा मानसिक एवं भावनात्मक आघात पर्न गएको छ ।’
प्ररहीको मृत्यु भएको माइकबाट प्रचार गरिएपछि डा. गोविन्द केसीले यस्तो आँसु खसाउँदै मानवीय क्षतिप्रति चिन्ता जनाएका थिए । र, आफू काठमाडौं जान तयार भएका थिए । के सरकारले केसीलाई गलाउनकै लागि जिउँदो मानिसलाई मरेको भनेर प्रचार गरेको हो ? अन्यथा किन मृत्युजस्तो मानवीय सम्वेदनाको विषयमा परिवारमाथि मानसिक र भावनात्मक आघात पर्ने गरी खेलवाड गरियो ? यसको जवाफ न त सरकारले दिएबको छ, न प्रहरी संगठनले नै ।
यसैबीच जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्दै माइकिङ गर्ने डीएसपी दाहालसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘केसी पक्षधरले प्रहरीलाई फुटेको सीसाले प्रहार गरेका थिए । एकजनाको अवस्था क्रिटिकल छ ।’
तर, तपाईले यस्तो सम्वोदनशील विषयमा किन गलत सूचना प्रवाह गरेको त ? भन्ने प्रश्नमा उनले कड्किँदै भने – ‘जे बुझ्नु भा’छ, त्यहीँ लेख्दिनू ।’
वि.सं. २०७५ कार्तिक ३० गते शुक्रबारको राशिफल